SOLASOLV solosola mandeha amin'ny sambo ho an'ny sambo | Solar Solve Marine
SOLASOLV® sy ROLASOLV®
Masoandro mibaribary ny masoandro sy ny làlan-jiro manga ho an'ny sambon'ny ranomasina
Fiara fitetezam-paritra - Fidirana - Tugs - Sambo entana - Sambo miaramila - Fitrandrahana solika - sambo mpitrandraka!
Raha mila solon-tsela ho an'ny solosaina ho an'ny sambo an-dranomasina ianao, dia miresaha amin'ny Solar Solve! Manamboatra jiro varavarankely izahay hatramin'ny 1975 ary manana traikefa voamarina ho an'ny QUALITY sy FIVORIANA. Ny varavarankely an-dranomasin'ny SOLASOLV® sy ROLASOLV® ny jiron'ny jiro sy ny jiro dia ny marika manerantany.
SolaSOLV® Solon-dranomaso mibaribary matevina no hany masoandro-masoandro mangarahara manohitra ny famirapiratan'izao tontolo izao izay karazana nankatoavina amin'ny fampiasana an-dranomasina ataon'ny vatan'ny karazana fankatoavana lehibe efatra - Lloyds, DNV, ABS ary RINA. Izy ireo dia fanampiana azo antoka azo antoka rehefa apetraka amin'ny varavarankely fitetezana, mampihena ny famirapiratana sy ny hafanana ateraky ny masoandro hamoronana tontolo azo antoka sy azo antoka kokoa.
RolaSOLV® Tapa-drivotra vita amin'ny lamba rongony no Flame Retardant. Izy ireo dia TOERAN-DRAZAKA MISY ao amin'ny karazana Tontolo nankatoavina ho ampiasaina amin'ny karazan-dranomasina rehetra. ROLASOLV® amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny ROLASOLV® amin'ny alàlan'ny alina manampy ireo mpiasa, vahiny sy tompony hahita fitsaharana sarobidy. Azo alaina amina loko maromaro hifanaraka amin'ny haingoo anatiny.
Tsy mbola nisy fotoana tsara hananganana SOLASOLV® mijery ny sambonao mba hiantohana ny fiantohana saferim-pitaterana sy ny fampiononana.
SOLASOLV® Solon-dranomaso mibaribary tsy manjelanjelatra
Misy adihevitra lehibe ara-toekarena sy tontolo iainana hampihenana ny fanjifana herinaratra, hanafoanana ny fandaniam-poana ary hampitomboana ny fahombiazan'ny angovo ao amin'ny indostrian'ny ranomasina sy ny fandefasana. Ny vokatra toy ny efijery fanodinam-bolan'ny SOLASOLV® dia afaka manampy amin'ny fanatanterahana izany amin'ny alàlan'ny fampihenana ny tinady amin'ny rafitra fanamafisana ny rivotra, manampy amin'ny fampidinana ny emissions CO2 manimba ho an'ny tontolo maitso sy madio.
Ankoatra ny tombontsoa ara-tsosialy sy ara-tsosialy, dia zava-dehibe ihany koa ny lafiny fiarovana amin'ny sehatra Anti Glare. Ny fiarovana amin'ny sambo an-dranomasina dia tena ilaina mba hikarakarana asa tsy misy fialan-tsasatra.
Ny solasin'ny SOLASOLV® dia mampihena hatramin'ny 93% ny famirapiratana sy ny fisaintsainana avy amin'ny masoandro ary tsara ho an'ny varavarankelin'ny tranokala, kodiarana, efitrano fanaraha-maso, efitrano fijerena / efitrano, ary varavarankely izay tena ilaina tokoa fa ny mpandeha sy ny mpandraharaha dia manana mazava tanteraka ivelany. Mandaitra ihany koa izy ireo amin'ny fandavana ny jiro mitaratra ny ranomandry sy ny lanezy ary ny ririnina amin'ny ririnina.
Amin'ny famoahana ny 87% amin'ny hainan'ny masoandro ny SOLASOLV® dia mamorona tontolo mahafinaritra sy mahazatra eo amin'ny tetezana.
Ny fitsipika sy ny fanamarinana iraisam-pirenena dia rakotra tsara ao anatin'ny faritry ny vokatra Solar Solve. Ny fanaraha-maso matetika sy ny fanamarinana avy amin'ny biraon'ny fanasokajiana ekena ary ny rafitra kalitao anatiny mahomby dia miantoka ny vokatra avo lenta, azo antoka ary mahomby. SOLASOLV® no hany marika eto amin'izao tontolo izao manana ny karazana nankatoavin'ny DNV, Lloyds, ABS ary RINA. Ny vokatra rehetra dia namboarina, azo esorina eo noho eo, mora apetraka ary tsotra ampiasaina.
Ny SOLASAFE® Anti-Glare Sunscreens dia manana antoka taona 7.
Apetaho ny SolaSOLV® marika amin'ny anarany - tsy misy safidy hafa - mba hiantohana ny fiaranao fiaramanidina manana fiarovana mahomby sy azo antoka indrindra azo alaina amin'ny fananganana vaovao, fametahana, fanavaozana ary fanovana… antoka azo tanterahina sy maimaimpoana.
Ny ROLASOLV® Fabric Blackout Roller jiro
ROLASOLV® Fabric Blackout Roller Blinds dia karazana nankatoavin'ny DNV ary voafaritra matetika ho an'ny Floatels, solika, solika, sehatra FPSO, sambo mpamatsy ary sambo hafa any ivelany. Ireo lamba avo lenta ananantsika dia manana Ny flame BS5438 dia manaparitaka mari-pahaizana ary manaraka ny IMO (Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny fisoratana) FTPC Fizarana 7 A.563 (14) Fanapahan-kevitra - ny fenitra fitiliana afo lehibe indrindra amin'ny lamba sy ny sarimihetsika.
Ny ROLASOLV® Fabric Blackout Jiro jiro dia natao ho an'ny ankamaroan'ny varavarankely, anisan'izany ny trano fialofana, trano fitetezam-paritra, teatra ary faritra hafa izay takiana ny sakana. Tena tsara ho an'ny mpiasa any am-piovana izay mila matory mandritra ny ora maivana.
SOLASOLV® Anti-Glare Solaran-tsary miraviravy
Tombontsoa sy endri-javatra amin'ny PRODUCT
Fahitana tsara sy azo antoka - vahaolana lava maharitra sy mahomby ho an'ny fiarovana amin'ny glare miaraka amin'ny fihenan'ny 93% mba ahafahana manara-maso ny fahitana sy fiarovana sy fiarovana.
Tontolo iainana miasa - mamorona tontolo iainana miadana kokoa ary mampihena ny fepetra takian'ny rivotra. Hatramin'ny 87% ny hafanana avy amin'ny masoandro dia nolavina mba hanamaivanana ny fahaverezan'ny mpiasa, ary ny fifandonana eo amin'ny tetezana dia azo fehezina mandritra ny taona.
Mitombo ny masony - Ny olana sy ny alahelo vokatry ny fipoahana tafahoatra sy ny fisaintsainana ny sariitatra elektronika dia nesorina ka mora kokoa ny mamaky azy.
Karazana nankatoavina - ny marika tokana nankatoavin'i Lloyds, DNV, ABS ary RINA.
Ny loko marina no voatazona - sarimihetsika saropady tsy misy fanamafisam-peo avo lenta ny tariby ary ny marika dia azo lazaina mazava tsara.
Quality Assured products - vita avy amin'ny fitaovana avo lenta indrindra ho an'ny faharetan'ny tontolon'ny rano an-dranomasina.
Ny vokatra rehetra dia azo antoka - Ny girona SOLASAFE® dia manana antoka garage 7 taona.
Miaro ireo faritra miharihary ao amin'ny vatana - farafahakeliny 98% amin'ny taratra UV manimba avy amin'ny masoandro no voasivana.
A custom made Ny vahaolana manokana ho an'ny mpanjifa tsirairay sy ny fepetra ilaina mba hahazoana antoka tsara ny fitantanana.
Mety amin'ny trano vaovao na retro-paoma.
Ara-dalàna ny fisakanana (mihidy) sy ny varavarankely, toerana voafetra sy ny endrika maimaim-poana, ary ny haben'ny varavarankely.
Fahombiazana azo antoka - Manaporofo ny rakitsoratry ny zava-bita mahatalanjona hatramin'ny 1988.
Mankatò ny fitsipika an-dranomasina - ISO 8468, M Fanamarihana 760, Fivarotana Merchant No. 1419 1998.
Safidy ny lokon'ny loko loko - Ny horonan-tsary mainty sy bronze tsy misy taratra dia mety tsara amin'ny fampiasana miaramila.
Safidy ny lokon'ny alim-bary - 400 + shades / loko.
Safidy ny rafitra miasa - manual, elektrika, switch, remote controlled or battery.
Mora ampiasaina, haingana sy mora ny mametraka - na ny ekipan'ny sambo. Ny singa kisety tokana misy torolalana feno sy fitaovana rehetra dia omena.
Piesy detase dia manome ny filaminana rehetra ho an'ny fiadanan-tsaina.
Miala tsiny avy hatrany - araho amin'ny IMO 5.1.1.2.6. for "Screensavers azo afindrafindra".
Familiana sarimihetsika mavitrika - Toeram-pirahalahiana madio sy malefaka ary tsy misy fiheverana mampiditra 'rafitra madio' biriky.
Ny sunscreens SOLASOLV® no hany alokaloka masoandro eto an-tany izay karazana nankatoavin'i Lloyd's, ABS, DNV ary RINA hanaporofoana fa mahafeno ny fepetra takian'ny lalàna farany.
More about SOLASOLV Sunscreens for marines
Tena toerana lehibe ity tontolo ity. Ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao dia manondro ny vokatra misy antsika amin'ny anarana samihafa. Ohatra, any Angletera, ny vokatra matetika dia antsoina hoe Window Blinds. Ao amin'ny USA dia antsoina hoe Window Shades izy ireo. Ny SOLASOLV® vokarintsika dia tsy mitovy amin'ireo jiron'ny varavarankely satria afaka mahita azy ireo ianao (madio izy ireo). Ny Window Blinds mangarahara ihany koa dia Anti-Glare mba hanampy hampihena ny hafanana sy ny jiro UV. Noho izany antony izany, ny anaran'ny jiro fanontam-pirinty mampihetsim-poana na ny lamosina fanovozam-baravarankely tsy misy fitaratra dia famaritana mazava kokoa. Eo am-panaovana ity dingana ity, ny sehatra goavam-be ataonay dia ny sehatra an-dranomasina / maritimes. Ny varavarankely mivelatra manjelanjelatra sy ny lamosina matevina manjavozavo dia ampiasaina ao amin'ny tranon-tsoratry ny fiaramanidina sy ny tetezan'ny fiaramanidina amin'ny sambo marin-drano, sambo mpitondra lakolosy, solika solika, sambo mpitondra sambo, sambo mpitaingina ary sambo hafa.
Izahay dia manamboatra varavarankely jiro mainty sy kiraro mainty ihany koa. Ity marika ity dia antsoina hoe ROLASOLV®. Ireo koa dia ampiasaina eo amin'ny sehatry ny ranomasina / ranomasina an-dranomasina, sambo tank, ferry, sambo cruise ary sambo mandeha an-dranomasina any amin'ny faritra tsy misy fitetezam-paritany toy ny cabins sy amin'ny vorontsiraka (hotely mitsingevana ampiasaina ho an'ny solika fitaterana solika sy lasantsy misy entona) . Ny Blackout Roller Shades dia amboarina amin'ny lamba Flame Retardant. Izy ireo dia TOERAN'ANDRIAMANITRA MISY an'izao tontolo izao izay karazana nankatoavina ampiasaina amin'ny karazan-dranomasina rehetra. Ny lamba vita amin'ny lelafo ampiasaina hampiasa ny alokaloka ROLASOLV® blackout windows dia azo alaina amina loko isan-karazany mba hifanaraka amin'ny haingon-trano anatiny na misy.
Ny vokatra azontsika atao koa dia atao antsoina hoe jiro ho an'ny rivodoza na ny jiro ho an'ny sambo rivotra. Raha tokony ho marina kokoa, ny teny hoe Anti-Glare dia tokony hampidirina eo anoloana ny anarana mba hanomezana lamosina ny lamosina Anti-Glare ho an'ny rindrina kodiaran-kodiarana na rindrin'ny kodiarana. Ny gorodona manohitra ny glare ho an'ny rivodoza rindrina ary ny rindrina amin'ny rindrina ho an'ny rivodoza na rindrin'ny tranon-jiro dia fomba iray hafa mahomby hamaritana ny vokatray.
Ny sarimihetsika sarimihetsika matihanina ampiasaina amin'ny tara-pahazavana manjelatra manohitra ny glare dia naorina amin'ny alalan'ny sarin'ny sarimihetsika polyester. Ny sarimihetsika dia voahodina mba hampihenana ny rivotra ary ny hafanana dia nolavin'ny alim-bary misy lamandy ao anaty sarona polyester. Ny mpikatroka UV dia tafiditra ao anaty horonantsary polyester mba hanampy amin'ny fanafoanana ny ankamaroan'ny taratra UV amin'ny masoandro. Ny sarimihetsika GRAY dia misy amin'ny fehikibo misy poizina.
Mahomby, azo itokisana ary maharitra
Ny sarimihetsika matevina dia napetaka amin'ny rindrin'ny alim-bosotra mavesatra ao anaty kavina fantsom-bokatra misy alim-bary misy kofehy matevina amin'ny alàlan'ny biriky entin-tanana mba hiarovana amin'ny vovoka sy ny vovoka. Ny sarimihetsika dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny mari-pana ambanin'ny zero, ny hafanana ety ivelany na ny hafanana. Antony manan-danja amin'ny rindrina amin'ny rindrina izay hampiasaina ao anatin'ny tontolo isan-karazany. Misy sarina tsy misy kasety ihany koa.
Ny ekipa teknika fanohanana ara-teknika misy antsika dia afaka miasa amin'ny sary omena raha ilaina.
Izahay dia mpamatsy masoandro amin'ny Cruise Liners, Orinasa fandefasana entana, orinasan-tsolika, ny minisiteran'ny fiarovana ary ny tafika an-dranomasina hafa manerantany.
Ny Solar Solve Solve dia ampiasaina amin'ny Floatels. Ny jiro mavo an'ny Blackout dia ny fiarovan-tena ho an'ny fiarovana ambony indrindra ary ny JIRAMA INDRINDRA AMBONY izay karazana nomena ho ampiasaina amin'ny alàlan'ny alam-barotra. Ny orinasa orinasa mpamokatra solika sy orinasa dia maniry ny tantsahan'izy ireo hahazo ny isany farafahakeliny rehefa tsy manefa. ROLASOLV® Rindran-jiro mivezivezy no manodina andro aman'alina mba hahafahan'ny mpanafika matory tsara, na rahoviana na rahoviana izany. Izany no mahatonga ireo orinasa solika sy orinasa ROLASOLV® Blackout Roller Blinds ary napetraka amin'ny sehatry ny solika, sehatra gazy ary ireo orinasam-panjakana hafa manerana ny tany. Tsindrio ity rohy ity mba hahafantarana bebe kokoa momba ny Jirama-jiro STOPLITE Blackout.